Real Madrid oo guul weyn ay u qalantay kaga soo gaartay Kooxda Espanyol RCDE Stadium + SAWIRO – Gool FM
Real Madrid oo guul weyn ay u qalantay kaga soo gaartay Kooxda Espanyol RCDE Stadium + SAWIRO
(La Liga) 28 Jan 2019. Real Madrid ayaa guul weyn kaga soo gaartay kooxda Espanyol oo ku sugneyd garoonkeeda RCDE Stadium, kadib markii ay ku xasuuqeen 2-4, kulankooda 21-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka La Liga.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-3 ay ku hogaamineesay kooxda martida ahayd ee Real Madrid.
Daqiiqadii 4-aad ee isla bilawga ciyaarta Karim Benzema ayaa doaah furay bandhiga goolasha wuxuuna ciyaarta ka dhigat 1-0.
15 daqiiqo Sergio Ramos ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0, xili uu caawinta goolkan lahaa Luka Modric.
Laakiin kooxda Espanyol ayaa la timid gool waxaana daqiiqadii 25-aad u dhaliyay laacibka Leo Baptistao ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-2.
Balse 45 daqiiqo marka ay ciyaarta ahayd Karim Benzema ayaa dhaliyay goolkiisii 2-aad ee ciyaarta ahna kii 3-aad ee kooxda Real Madrid waxayna sidaas dheesha ku noqotay 1-3 ay ku hogaamineyso Los Blancos.
64 daqiiqo Gareth Bale ayaa hurdo dheer u diray kooxda Espanyol wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-4.
Raphael Varane ayaa qaatay kaarka roosaha 72 daqiiqo marka ay ciyaarta ahayd.
kooxda Espanyol ayaa markan dhalisay goolkeeda 2-aad ee ciyaarta waxaana dheesha 2-4 ka dhigay xidigooda Roberto Rosales.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-4 ay kooxda Real Madrid kaga soo adkaatay Espanyol oo ku ciyaareysay garoonkeeda RCDE Stadium.
Juventus oo wali la celin la’ayahay kadib markii ay guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Lazio Stadio Olimpico + SAWIRO
Ander Herrera oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka Manchester United tan iyo markii uu yimid Tababare Solskjær